ILembe nezinhlelo zokuqinisa ubudlelwano bomqashi nezisebenzi – SIVUBELAINTUTHUKO
ILembe nezinhlelo zokuqinisa ubudlelwano bomqashi nezisebenzi
Posted on March 24, 2022 April 3, 2022 Author Admin	Comment(0)
UMASIPALA wesiFunda seLembe uqinise ubudlelwano obuhle phakathi kwezisebenzi nomqashi ngenhloso yokugcina kuhanjiswa kahle intuthuko kubantu njengoba wenze ingqungquthela yezinsuku ezimbili lapho obekucobelelwana ngamasu amahle angasetshenziswa ukuthuthukisa abantu abakhele lesi sifunda.
Le ngqungquthele ebingomhlaka 17-18 kuMarch KwaMaphumulo Council Chambers beyiholwa iMeya yeLembe uKhansela Thobani Shandu ehambisana nethimba elisemkhandlwini kamasipala ewuholayo okufaka usomlomo nezinye izikhulu eziphathiswe izikhundla eziphezulu kulomasipala. Nabezinyunyana zezisebenzi zomasipala okuyi-South African Municipal Workers Union (SAMWU) ne-Independent Municipal and Allied Trade Union (IMATU) bebeyingxenye yale ngqungquthela.
ISIVUBELA INTUTHUKO ithole ukuthi le ngqunguthela beyizoqinisa amaxhama ezokuxhumana ngokuthi kubanjiswane ekuqondeni izinselelo ezibhekene nezakhamizi kanjalo nokudweba uhlaka olucacile lokuhambisa intuthuko kubantu.
Ekhuluma nenhlosongqango nalokho abakubhekile uMnu Shandu iMeya uthe ngalokhu kuhlangana kwabo bazoqinisa uhlaka lokusebenza ngokuhlanganyela kwezisebenzi nokuvala isikhala esingagcina sibavimbela ekwenzeni lokho okumelwe wumasipala wabo kokuthuthukiswa kwabantu. “Sikholwa ukuthi izinqumo ezizothathwa lapha zizogculisa zonke izinhlaka phakathi kwezisebenzi nomasipala ukuze usebenze kahle. Siyethemba ukuthi sizosebenzisana kahle ekugcineni imithetho yezisebenzi ukuze kusizakale umphakathi,” usho kanje.
USomlomo weLembe uKhansela Dolly Shandu ucele ukubambisana nezinyunyana ukuza nohlelo lwazo nangokuthi kunxuswe izisebenzi zikamasipala ukukhokhele lokho ezikutholak umasipala njengogesi namanzi.
Le ngqungquthela isongelwe emahhovisi kamasipala ILembe lapho kubuyekezelwe khona izinqumo ezithathiwe ebezigxile kakhulu ekubhekeleni ukugcwaliswa kwezikhala zemisebenzi kamasipala (filling of vacancies), ukubhekwa kwemisebenzi (job evaluation), izindlela zokusebenza (working conditions), imihlomulo yezimoto (car allowance) nokunye.
Iphini lemeya uKhansela James Van Whye uthe uyathemba ukuthi izinqumo ezithathiwe zizosebenza kahle kwamasipala kubonakale nokusebenza kwesabelo mali sikamasipala. Uthe amaphuzu aphakanyisiwe amqoka ukholwa ukuthi nentuthuko ziohanjiswa kahle kubantu.
Kuvuselelwa umnotho ongeniswa ama-BnB eMgungundlovu
TSEPO MOTLOKOA KUBUYISE ithemba ukuzinikela kweMeya yesiFunda saseMgungundlovu uMnu Mzi Zuma ekulekeleleni ama-guest house akuleli dolobha asala dengwane kwakubheduke iCOVID-19 okwalandelwa ukuvalwa kwezwe ukunqanda ukusabalala kwalombhedukaze izindawo zokulala zasala zingenzi nzuzo. UMnu Zuma uhambele eMadlula Guest House eScottsville okuyindawo yezokuvakasha eyasungulwa yimpunyela yaseMgungundlovu engasekho uMnu Sikhumbuzo Hlela ngokubambisana nenkosikazi yakhe uZandile Hlela eyobona le ndawo ukuthi […]
Udaba oluthunyelwe UBUDLELWANO phakathi kukaMasipala wasOndini nabakwa Gift of the Givers lokhu buqhubeke njalo njengoba lenhlangano engenzi nzuzo iphinde yabuya Ondini izonikela ngenqolasihlalo kanokusho kumndeni wakwa Gumede Ondini ku Wadi 11 kwaSishwili ngaseMahlabathini esikoleni. UThobani Gumede (11) wazalwa ngaphansi kwesimo sokukhubazeka. Unikelelwe ngalesi sihlalo ukuze simlekelele ngokwempilo yakhe. Umawakhe uNks uSanele Gumede uhluleke nawukuzibamba wangakwazi […]
UMKHANKASO KAMASIPALA WOKUKHUCULULA ITHEKU